လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်သို့၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိကြောင်းအထောက်အထားမရှိခြင်း (Prause et al ။ , 2013) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်။
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကို၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုသတင်းပို့သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်း” ဝေဖန်မှု (Prause et al ။ , 2013)
နီကိုးလ် Prause porn လေ့လာမှုလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်နှင့်အတူရလဒ်တွေကိုမိုက်စေသော
ကလေ့လာမှုမှာရလဒ်များ နီကိုးလ် Prause ၏ SPAN ဓာတ်ခွဲခန်း အမည်စာရင်း"Hypersexuals" တွင် Emotion Dysregulation ၏အဘယ်သူမျှမသာဓကတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှသူတို့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုအစီရင်ခံအဘယျသို့နှင့်အတူ align အချို့သောဟောင်း porn အသုံးပြုသူများသည် သတင်းပို့ရသည်။ အမည်ရသောညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအကွာအဝေးလျော့နည်းသွား။
ဤလေ့လာမှု compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် vanilla porn မှလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအံ့သြစရာအဘယ်သူမျှမ အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုကျန်းမာဘာသာရပ်များထက် vanilla porn ဖို့ပို desensitized ခဲ့ကြသည်အဖြစ်။ သူတို့ကပျင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် SPAN Lab ၏လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်သည်ဤသိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်ကိုဖုံးကွယ်သွားပြီးရလဒ်အား“ လိင်စွဲလမ်းမှုပုံစံ” နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ပြသသည်။ (အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ )
လေ့လာမှုက“ hypersexuals” လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအကွာအဝေးကို ၃ မိနစ်ကြာတဲ့သဘာဝရုပ်ရှင်နဲ့ ၃ မိနစ်လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့တယ်။ လေ့လာမှုအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အယူအဆမှာ“ hypersexuals” သည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံး၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်“ hypersexuals” သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုများမြင့်မားလာခြင်းအပြင်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခြင်းကဲ့သို့သောအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုမြင့်မားခြင်းများကိုပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူက တပြိုင်တည်းဖြစ်သော “ coactivation” ကိုနှိုးဆွသောအခါ၊ ပိုကောင်းသောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်များ၏အတွေ့အကြုံ။
"ဒီလေ့လာမှုကတကယ်တော့များအတွက်သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဆန့်ကျင်ဘက် ပုံစံ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်ဟုညည်းညူသူများသည် နည်းသော သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြproblemsနာတွေကိုမတင်ပြခဲ့သူတွေထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တွေကိုစိတ်ခံစားမှုအရရောထွေးစေခဲ့တယ်။ ”
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုပြသခြင်းကိုပြသတဲ့ပြofနာတွေကိုညည်းညူသူတွေ နည်းသော ထိန်းချုပ်မှုထက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု coactivation ။ "
"ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှန်တကယ်၌ရှိကြ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဦး တည်ချက်၊ (အလေးပေးပြောကြားသည်)
SPAN Lab မှသုတေသီများကဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆောင်သောခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများကြုံတွေ့သင့်သည်ဟူသောအယူအဆကို အခြေခံ၍ ကြိုတင်လေ့လာမှုများမရှိကြောင်းဝန်ခံသည်။
'' ပေါင်းစည်းခြင်းအဆင့် 'ကိုလက်ခံသည့်အတိုင်းအတာမရှိပါ။
သူတို့ကမလျြောကြောင့်ဟုဆိုကာတစ်သီအိုရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စွဲမော်ဒယ် (ကြိုတင်အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူထွက်ပြုမူသူကိုစွဲအကြောင်းကိုယူဆချက်အပေါ်အခြေခံပြီး) လိမ်,
"hypersexual disorder" ကိုထောက်ခံအားပေးသူအများစုက dysregulation ကိုအကျိုးသက်ရောက်တာကရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
ဤဖော်ပြချက်အတွက်အကိုးအကားမရှိပါ မေးခွန်းထုတ်ဖို့အကြောင်းပြချက် ဂန္ထဝင်လိင်စွဲလမ်းမှုသဘောတရားများသည်ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများအတွက်သေချာပေါက်သက်ဆိုင်မှုရှိ / မရှိ။
SPAN Lab ၏ယူဆချက်သည်နောက်ပြန်နောက်ပြန်လှည့်ကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပေလော ထိန်းချုပ်မှု စိတ်ခံစားမှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပြသရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆပိုပြီးခဲ့ကြသည် (သူတို့တကယ်တော့ပြသခဲ့သည်)? ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သုတေသီရှင်းလင်းစွာအနေနဲ့အစောပိုင်းကလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းဖော်ပြထား သာမန် ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တုံ့ပြန်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကျယ်ပြန့်ရှိသည်:
ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်လှုံ့ဆော်မှုများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့်အပျက်သဘောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ခံစားချက်များကိုမြင့်မားစွာပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ (Peterson & Janssen, 2007)
တနည်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုဿုံပုံမှန်ရှိကြ၏။ ဒါဟာ alignment ကိုထဲကသူပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို vanilla porn မှ (habituated) ပျင်းခဲ့သည်။ သူတို့တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကား၊ ညစ်ညမ်းသောစိတ်ခံစားမှုများသည်ပြင်းထန်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများ၏ဘုံတိုင်ကြားချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အများစုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုသူတို့မသုံးမီအထိသူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအသံတိတ်ရပ်တန့်သွားသည်ကိုမသိကြပေ။ ဤတွင်အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုကိုပြသောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပုံမှန်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ပထမယောက်ျား -“ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တခါတရံမှာသင်ခံစားရမဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလက်ခံရမယ်။ ငါအတွက်ကတော့အထီးကျန်တာ၊ ဝမ်းနည်းတာ၊ လိုအပ်တာစတာတွေပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတာနဲ့အမျှဒီအရာတွေကဖြတ်သန်းသွားတယ်။ သင်ခံစားရသည့်အမြင့်သည်တိုးပွားပြီးယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုခံစားရသည်။ အဆိုပါအနိမ့်လွန်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်သင်ယခင်ကထက်ထပ်မံ nosedive နေကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်လိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုလောက၌ထိတ်လန့်စေခဲ့ပြီး၊ ယခုတွင်ငါသည်ယခင်ကထက်လူ့စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုခံစားလာရသည်။ ”
ဒုတိယလူ။porn ကိုဖြတ်ခြင်းအရာကထုံမှုကိုကုသပေးတယ်။ ငါ့အတွက်အရောင်တွေအားလုံးငါ့ဘ ၀ ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ တေးဂီတကပိုစည်လာတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကငါ့ကိုငိုတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူမှရယ်မောမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအများကြီးပိုပြီးရယ်မော; ငါလူမှုရေး setting တွင်လမ်းပိုမိုပျော်စရာရှိသည်, စတာတွေငါဝမ်းနည်းဖွယ်ကာလအတွင်းရှောက်သွားလေ၏။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်အရာရာသည်နေရာမှန်သို့ကျသွားပြီးသင်၏စိတ်ခံစားမှုအားလုံးသည်ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဘဝဟာပိုပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းလာပါပြီ။ ”
Bottom Line: vanilla porn ကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးသော compulsive porn users ဟုခေါ်သည့်သူများအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်ရှိသည်။ အနိုင်ကျင့်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ပျင်းစရာကောင်းသည်။ Vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ဟုမှတ်ပုံတင်မရှိတော့ပါ။ သူတို့ဟာ desensitized ခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့, ဒီ Prause2နှစ်ကြာပြီးနောက်တစ်အစီရင်ခံအတိအကျကဘာလဲ တူညီသောဘာသာရပ်များအများအပြားပါဝင်သောလေ့လာမှု!
သုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကစပြီးလိင် - စွဲလမ်းမှုသီအိုရီအပြင်“ hypersexuals” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လိင်စွဲလမ်းသူများနှင့်ပတ်သက်သောအသုံး ၀ င်သောအချက်အလက်များကိုအသုံးမပြုဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ဟုလူသိများသောဤသူများသည်လိင်စွဲလမ်းသူများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မကိုက်ညီသောစိတ်ခံစားမှုများရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာလုံးဝစွဲလမ်းသူများမဟုတ်) ဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးဒီအားထုတ်မှုနှင့်အတူပြproblemsနာများအများအပြားရှိပါတယ်:
အဆိုပါသုတေသီများအဘို့ကို pre-screen ကိုသင်တန်းသားများကိုမ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူတွေဟာစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ စိစစ်စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်အမှန်တကယ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်“ လိင်ကွဲပြားမှု” နှင့်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲ” သည်မရေမရာအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သုတေသီများက၎င်းတို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲသူများနှင့်ပတ်သက်သောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အကြံပြုလိုလျှင်၎င်းတို့သည် porn စွဲလမ်းမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအမျိုးမျိုးသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများရောနှောနေခြင်းထက်သုတေသီများသည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုကိုပါ ၀ င်သူများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည် ၃ မိနစ်လိင်ကွဲလိင်စိတ်တူညီသောရုပ်ရှင်သည်ပါဝင်သူများ၏လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်လက်ရှိ porn အရသာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သောလိင်အကျင့်စွဲသူသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာကြုံရနိုင်သည်။ စွဲလမ်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထွက် sort တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အမင်းပျော့ပြောင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု.
ဒီနေ့လူငယ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အရှက်ရခြင်းအပေါ်အခြေခံသောလိင်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ လူအများစုကအကျိုးရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်တဲ့ပြusersနာတွေရဲ့ပျမ်းမျှအသက်က ၂၄ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ် မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX.
ထို့ကြောင့်ဤသင်တန်းသားများသည်စွဲလမ်းနေသည့်တိုင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (သို့) ရှက်ရွံ့ခြင်း (အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု) ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်စိတ်ခံစားမှုများကိုပြသမည်ကိုမရှင်းလင်းပါ။ အမှန်မှာ၊ ညစ်ညမ်းသောလူငယ်စွဲလမ်းသူများသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ၃ မိနစ်ကြာလိင်စိတ်နိုးထစေသည့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုနေသူပင်ရုပ်ရှင်ကားကြောင့်အပျက်သဘောဆောင်သောခံစားမှုများကိုခံစားရန်အစပျိုးလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါသလော။
မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲသူများအား“ hypersexuals” ဟုသတ်မှတ်ခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုလက်မခံပါ လိင် စွဲ '' (ဆီက) စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ တနည်းကား, သုတေသီများ '' အယူအဆအားနည်းနေသည်။
လျစ်လျူရှု Key ကိုစွဲမှ neuroscience သဘောတရားများ
porn စှဲအလွန်တိကျတဲ့နိုင်ပါတယ်နှင့် အထူးသဖြင့် fetishes မှချည်ထားသော။ သူတို့ဟာမကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘဲအစွန်းရောက် porn ပါဝင်ပတ်သက်နေ အများအပြား porn စွဲတင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန် သူတို့အဖြစ် edgier ပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ် နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာရန်။ သူတို့၏ထူးခြားသောထူးခြားချက်များအတွက် Visual Trigg များသည်ပြင်းထန်သောတုန့်ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တိကျတဲ့တွေကိုမှက Hyper-reactivity ကို အဖြစ်လူသိများသည် "sensitization ။ "
အခြားတစ်ဖက်တွင်, "desensitization" ကိုရည်ညွှန်းသည် လှုံ့ဆော်မှုမှတုန့်ပြန်လျော့နည်းသွား မဟုတ် တစ်ခုစွဲတိုက်ရိုက်ချည်ထားလေ၏။ ဒါဟာအလုံးစုံ numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည် အင်တာနက်ကိုစွဲ, အစားအသောက်စွဲ နှင့် လောင်းကစားစွဲ။ အခြားအမူအကျင့်စွဲသူများအားပုံမှန်အပျော်အပါးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုထည့်သွင်းဖော်ပြသည့်ယန္တရားသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲစေသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏အကွာအဝေးကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။
စကားမစပ်, dopamine အဆင့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် dopamine sensitivity ကို "desensitization" ဖြစ်ရပ်ဆန်းနောက်ကွယ်မှအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဥပမာ, အတွေ့အကြုံစဉ်းစားပါ ဆန္ဒအလျောက်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူပိတ်ဆို့သည်သူ၏ dopamine တုံ့ပြန်မှုခဲ့များနှင့်လေးနက်ယာယီအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံသောသူသည်ဤကျန်းမာနုပျိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ:
"7 နာရီအတွင်းမှာမစ္စတာတစ်ဦးကသူ့ကိုယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြားပိုပြီးအကွာအဝေးခံစားရတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်; အမြင်အာရုံနှင့်အကွားနိုငျလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းချွန်ထက်ခဲ့ကြသည်။ သူကလှုံ့ဆျောမှုနှင့်မောပန်းခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့။ 18 နာရီအတွင်းမှာသူအခက်အခဲနှိုးထခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတိုးပွားလာခဲ့; သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှိုင်းသလိုပဲ။ သူကစကားနည်းသည် fluency ခဲ့။ "
ဆိုလိုသည်မှာယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောတိကျသောအတိုင်းအတာများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည့်ရှားရှားပါးပါးယေဘုယျ ၃ မိနစ်ဓာတ်ခွဲခန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အချို့အတွက်မူမှိုင်းသည် (သို့မဟုတ် သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ကိုက်ညီမပါလျှင်ပင်ဆုတ်ခွာ) ။ အခြားသူတွေထိုသို့ရစေရန် arousal ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုအခြားသူများအလွန်အမင်းကြောင့်အချို့ရှုထောင့် (တို့ကနှိုးဆွ) အား sensitized ခံရပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့နေဆဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူအပြည့်အဝ, ပုဂ္ဂလိက porn session တစ်ခုပြီးနောက်၎င်းတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပေလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးကတော့သုတေသီများသည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး စီ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီမည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၏နှစ်သက်သော porn အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ဟုတ်မဟုတ်မသေချာသည့်သုတေသန စွဲ '' sensitized "တုံ့ပြန်မှုမှတ်တမ်းတင် သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ numens "desensitized" တုံ့ပြန်မှု အများကြီးမပြောနိုင်ဘူး တနည်းကား, စွဲများအတွက်ယေဘုယျပုံစံကိုနေ့စဉ်လှုံ့ဆော်မှုမှအတော်လေးထုံဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏အထူးသဖြင့်စွဲသို့ထိပုတ်သောတွေကိုမှ hyper- နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှက်ကြောက်အားလုံးသည် SPAN Lab မှပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်စိတ်ခံစားမှု dysregulation အကြောင်းကိုအသုံးဝင်သောအမှုအရာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မီဘို့ထိန်းချုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်းသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျသောယူဆချက်များကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်သူတို့၏ခေါင်းစဉ်များကိုအမှန်တကယ်ရလဒ်နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုအတွက်ပိုမိုတိကျသောခေါင်းစဉ်မှာ“ပြဿနာ Porn သုံးစွဲသူထိန်းချုပ်ရေးသန်း Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု Show ကိုကျဉ်းမြောင်းတဲ့ Range။ "
UPDATE 1: အဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက် Prause et al ။, 2013 ဖြစ်ပေါ်လာ နီကိုးလ် Prause ဖွငျ့ရေးသားနှစ်ခုအကြာလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုအတူတူဘာသာရပ်များ။ စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်သင်သည် SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများဤနှစ်ခုအကြာမှာတော့ဝေဖန်မှုကွပ်ထားတယ်များပြားလှသောပြဿနာများကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, (လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိ et al ။, 2013)
"Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Module (Prause et al ။, 2015)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အထက်လေ့လာမှု #2 (Prause et al ။, 2015) အစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ correlating vanilla porn ဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ပြုလုပ်အဖြစ်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် supporting နာတာရှည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုထိန်းညှိသည်ဟူသောအယူအဆ (တွေ့ရှိချက်များနှင့်တူညီသည်) Kuhn & Gallinat ။ , 2014) ။ ရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်း ၉ ခုသည် YBOP ၏သုံးသပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် -
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် LPP လျော့နည်းသွားစေခြင်းငှါ စွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်း။ အရာအားလုံးပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည် (2016)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016)
တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော (2016)
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017)
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ
ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
UPDATE 2: အများကြီးဇူလိုင်လ, 2013 ကတည်းက transpired သိရသည်။ UCLA နီကိုးလ် Prause ရဲ့စာချုပ် (အစောပိုင်း 2015) သက်တမ်းတိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမရှည်တစ်ခုပညာသင်နှစ် Prause ရှိပါတယ် မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်စေ့စပ် သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
ဒါဟာအထက်တွင်လေ့လာမှု, သံမဏိ et al (2013), နှင့် Prause et al (2015) တူညီသောဘာသာရပ်များအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ပုံရသည်။ ကနေဒါပါလျှင်အောက်ပါကောက်နုတ်ချက် သံမဏိ et al တစ်ဝေဖန်မှု။ သက်ဆိုင်:
တို့ကအဓိကပြောဆိုချက်ကို သံမဏိ et al။ ယင်းကြောင့် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG ဖတ်ခြင်း (P300) ဘာသာရပ်များနှင့်အချို့သောမေးခွန်းလွှာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုက -
အဆိုပါသုတေသီများစှာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ (အမျိုးသမီးများ, ယောက်ျား, လိင်ကွဲ, Non-လိင်ကွဲ) ကို ရွေးချယ်. , ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးကိုစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပြသခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါကဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုယောက်ျား, အမျိုးသမီးနှင့် Non-လိင်ကွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိကွဲပြားခြားနားသောအဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။ ဤသည် (အောက်တွင်) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမေးခွန်း သံမဏိ et al ။ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်ရန်အားကိုးအားထားပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း / စွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်တရားဝင်မဟုတ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် Prause က EEG ရမှတ်များနှင့်“ hypersexuality” အကြားအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြခဲ့သော်လည်း porn စွဲသူများနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုမျှော်လင့်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
စမ်းသပ်ခြင်းဘာသာရပ်များအနက်လက်မခံနိုင်မတူကွဲပြားခြင်း: အဆိုပါသုတေသီများစှာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ (အမျိုးသမီးများ, ယောက်ျား, လိင်ကွဲ, Non-လိင်ကွဲ) ကို ရွေးချယ်. , ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးကိုစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီး porn ပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သုတေသီများကို select သောစွဲလေ့လာမှုများ, များအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချိုးဖောက်နေသောကြောင့်ဤအရေးပါ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကျူ (IQ) အရဘာသာရပ်များ (ပိုပြီး ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်ယွင်းရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။
ဒါဟာသုတေသနအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်အတည်ပြုအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ arousal တိုင်းတာသောဤတစျခုကဲ့သို့လေ့လာမှုများအဘို့အထူးသဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ဦးတည်းဤသည်အပြစ်အနာအဆာ EEG ဖတ်နှင့်မေးခွန်းများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကရှင်းပြသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအတည်ပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရှုပါ:
လိင်စိတ်နိုးထနှင့် Erotica မှထိခိုက်စေတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာကျားကွာခြားချက်များ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ကို Activation အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: neuroimaging လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်
လိင်ကွဲပြားမှု: စိတ်ခံစားမှု-Charge ပုံရိပ်တွေထိတွေ့ကာလအတွင်းလူသားများတွင်အရေပြားစာနာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု
ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်စီးကရက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကွဲပြားအမျိုးအစားများကိုတုန့်ပြန်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာ (LPP): အကြောင်းအရာနှိုင်းယှဉ်
တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အမြင်အာရုံ cortex အကြားအပြန်အလှန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။
အကျိုးသက်ရောက်စေရုပ်ပုံအမြင်: အမြင်အာရုံ cortex အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု?
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား
Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအရေပြား conduction တုံ့ပြန်မှု။
ကျွန်တော်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ် Non-လိင်ကွဲ တစ်ဦးလိင်ကွဲအထီးအဖြစ်အထီး-အမျိုးသမီး porn များအတွက်တူညီစိတ်အားထက်သန်မှုရှိသနည်း အဘယ်သူမျှမနှင့်သူ / သူမ၏ပါဝင်မဖြစ်နိုင်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်စပ်မှု rendering EEG ပျမ်းမျှဖျက်နိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရှုပါ, လိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ရွံရှာ၏အာရုံကြောဆားကစ်: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။
အံ့သြစရာကောင်းတာက Prause သူ့ကိုယ်သူတွင်ဖော်ပြထား အစောပိုင်းကလေ့လာမှု (2012) တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်လွန်စွာကွဲပြားခြားနားကြောင်းကို:
"ရုပ်ရှင်လှုံ့ဆော်မှုဟာလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအာရုံစိုက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု (Rupp & Wallen, 2007), တိကျတဲ့အကြောင်းအရာ (Janssen, Goodrich, Petrocelli, & Bancroft, 2009) သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများအောင်လက်တွေ့သမိုင်းများအတွက် preference ကိုအားနည်းချက်ရှိပါတယ် ( Wouda et al ။ , 1998) ။ "
"သို့တိုင်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုပြသသည့်အမြင်အာရုံကွဲပြားမှုများတွင်များစွာကွဲပြားလိမ့်မည် (Graham, Sanders, Milhausen, & McBride, 2004)"
တစ်ဦးအတွက် Prause လေ့လာမှု : ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သူမကပြောသည်ဒီတစ်ခုမတိုင်မီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
"လူကြိုက်များတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိရောက်သောရုပ်ပုံစနစ် (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1999) ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများစွာသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်၎င်းတို့၏နမူနာတွင်မတူညီသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ "
ဒီတစ်ခါလည်း Prause သူမ၏လက်ရှိ EEG ဖတ်နိုင်အောင်အများကြီးကွဲပြားရတဲ့အကြောင်းရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုဘာသာရပ်များတစ်လိင်ကွဲပြားခြားနားအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူမျှော်လင့်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။
မသက်ဆိုင်သောမေးခွန်းလွှာ: အဆိုပါ SCS (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်ရန်လို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ 1995 အတွက် created နှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့လိင်ကိစ္စနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ဆက်ဆံရေး စိတျထဲမှာကို (AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. ) ။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်:
"ဒီစကေး [ပြ?] သင့်ပါတယ်ထားပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏နံပါတ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအမျိုးမျိုး၏အလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများသမိုင်း၏နှုန်းထားများကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့။ "
ထို့အပြင် SCS ကိုတီထွင်သူကဤကိရိယာသည်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ပညာပြသခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပေးပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုရမှတ်များနှင့်အခြားစိတ်ပညာဆိုင်ရာအမှတ်အသားများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsivity ယောက်ျားအတွက်စိတ်ပညာ၏အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီး။"
ထို့ပြင် SCS compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏဝေးသောရှိသည်ပေးထား, အင်တာနက်-porn စွဲလိင်စွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဂိုးသွင်းအံ့သောငှါမိတ်ဖက်-related မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည် ဆိုက်ဘာ erotica အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်စာစားချင်စိတ်ကို အမှန်တကယ်လိင်ထက်။
အဆိုပါ SCS, ဒုတိယ hypersexuality မေးခွန်းလွှာ (ကဲ့သို့ပင်အဆိုပါ CBSOB) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ၎င်းသည် "hypersexual" ဘာသာရပ်များနှင့်၊ ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
သုတေသီများကအုပ်ချုပ်ခဲ့သောနောက်ထပ်မေးခွန်းလွှာကို“ Pornography Consumption Effect Scale” ဟုခေါ်ဆိုသည်။psychometric အိပ်မက်ဆိုး“” နှင့်၎င်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုညွှန်ပြနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းမရှိပါ or လိင်စွဲလမ်း။
ထို့ကြောင့် EEG ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဤမေးခွန်းလွှာများအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းသည်လေ့လာမှု၏ကောက်ချက်သို့မဟုတ်စာရေးသူ၏ပြောဆိုချက်များအပေါ်ထောက်ခံမှုမရှိပါ။
Pre-Screening အဘယ်သူမျှမ: Prause ၏ဘာသာရပ်များကိုကြိုတင်မစစ်ဆေးထားပါ။ ခိုင်လုံသောစွဲ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်ယခင်ကအခြေအနေများ (စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ OCD၊ အခြားစွဲလမ်းမှုများ) ရှိသူများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤသည်တာ ၀ န်ရှိသောသုတေသီများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ကင်းဘရစ်လေ့လာမှု သင့်လျော်သောစိစစ် & နည်းစနစ်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Prause ၏ဘာသာရပ်များသည်လည်းညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအတွက်ကြိုတင်မစစ်ဆေးထားပါ။ စွဲလေ့လာမှုများအတွက်ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောသူများကိုမကျင့်သောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်ဘာသာရပ်များကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုနှင့်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤသုတေသီများတစ် ဦး သော်လည်း, ဒီမလုပ်ခဲ့ဘူး အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း-စွဲစမ်းသပ်တည်ရှိ။ အဲဒီအစား, သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးအုပ်ချုပ် ပြီးနောက် သင်တန်းသားများကိုပြီးသားကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ကရှင်းပြသည်သကဲ့သို့, SCS porn စွဲသို့မဟုတ်မိန်းမတို့အဘို့တရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။
မတူကွဲပြားခြင်းဘာသာရပ်များသည် Generic Porn အသုံးပြုခြင်း: သံမဏိ "မလုံလောက်" သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ရလဒ်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုဝန်ခံသည် စံပြအခြေအနေများတွင်ပင်စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုရွေးချယ်မှုသည်ခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ (အထူးသဖြင့်ဆေးစွဲသူများ) သည်အရသာအမျိုးမျိုးဖြင့်မကြာခဏတိုးများလာသည်။ အတော်များများကအစီရင်ခံစာ သူတို့ရဲ့ porn- ကိုက်ညီမညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများအနည်းငယ်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိခြင်းdu-jour- အစောပိုင်းကသူတို့၏ညစ်ညမ်းသောစောင့်ကြည့်ရေးအလုပ်များတွင်သူတို့နှိုးဆော်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သောအမျိုးအစားများပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို high-definition ဗီဒီယိုများဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောရုပ်ပုံများသည်တူညီသောတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်ယေဘူယျ porn အသုံးပြုခြင်းသည်ရလဒ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်နေပါကတိုက်နယ်လှုပ်ရှားမှုအားဆုချီးမြှင့်ခြင်းသည်တိုးများလာလိမ့်မည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်လိင်ကွဲလိင်စိတ်နိုးထသည့်ရုပ်ပုံများဖြစ်လာပါကသူ / သူမ၏လက်ရှိအမျိုးအစားနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအရည်အသွေးမြင့်သော fetish ဗီဒီယိုများနှင့်မကိုက်ညီပါကအသုံးပြုသူမှတုန့်ပြန်မှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမရရှိနိုင်ပေ။ ပင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်။ ဘာလဲ ထို? "
၎င်းသည်လူတိုင်းကိုအစားအစာတစ်ခုတည်းဖြစ်သောမုန့်ဖုတ်ထားသောအာလူးများကိုစားခြင်းဖြင့်အစားအစာစွဲလမ်းသူများ၏ cue reactivity ကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး သည်အာလူးဖုတ်ခြင်းကိုမကြိုက်ပါကသူမအစာအလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြhaveနာမရှိသင့်ပါသလား။
ခိုင်လုံသောစွဲလမ်းမှု“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” တွင် - ၁) တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုဘာသာရပ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ (၂) အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အခြားစွဲလမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ (၃) ခိုင်လုံသောမေးခွန်းပုံစံများနှင့်အင်တာဗျူးများကို အသုံးပြု၍ ဘာသာရပ်များသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည်။ သံမဏိ ထိုအရာများကိုမပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည်။